Sawirro: Nin ku qasbay xaskiisa Ina ay sawiradeeda oo Qaawan Ku faafiso Internet-ka sabab cajiib ah darteed ! | Xaqiiqonews
Sawirro: Nin ku qasbay xaskiisa Ina ay sawiradeeda oo Qaawan Ku faafiso Internet-ka sabab cajiib ah darteed !
gabar kurdish oo ku nool yurub ayaa faafisay sawiradeeda oo qaawanaan waxba aan dhaamin ka dib markii ay baneystay xabadka oo dhan iyadoo taageero ka heysata ninkeeda iyagoo sababtuna ku sheegay waxa ay ugu yeereen farriin Lamaanne ah oo ay u diriyaan dumarka reer kurdistaan.
gabdhan oo lagu magacaabo Estara kariim ayaa dood badan ka dhax dhalisay baraha bulshada gaar ahaan dadka kurdiyiinta dhaxdooda ka dib markii ay faafisay sawirka xabadkeeda oo qaawan iyadoo ku qortay oraah english ah
“I am not your slave” oo micaheedu tahay” ma ahi addoontaada”.
kareem ayaa sawirkeeda oo warbaahinta ay qaadatay soo raacisay fariin ay sheegtay in ay u dirreysa wax ay ku tilmaamtay ragga ka shaqeeya seddexda Madow oo kala ah” Ragga Siyaasadda. Ragga Diinta Iyo ragga bulshada u shaqeeya” iyadoo tiri” hadii aan dumarka u aragno un in ay yihiin sida cad hilib ah oo la iska xoogga markii galmo lala sameeynaayo markaasi qiimo malahan in laga sheegaayo Aqoon iyo in dowlad la dhiso iyo in ururo haweeen la sameeyo sidoo kale macno ma lahan markaasi in siyaasad laga sheegeeyo iyo waliba janno iyo naar !”
Kareem ayaa sheegtay in hadii aysan xor noqon naagta kurdishka ahi aysan wanaagsanaan doonin dowlad kurdistaan la dhaho in la sameeyo iyadoo ugu danbeyn sheegtay in ay kula nooshahay ninkeeda si farxad iyo kalsooni leh loona baahanyahay in dumarka oo dhan xorriyadaasi helaan.